ဂြိုဟ်ဂီယာအုံများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောစက်များ၊ helical gear, sprial bevel ဂီယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ၊ လယ်ထွန်စက်ဂီယာများ၊ ထရပ်ကားဂီယာများ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ
ပင်မစာမျက်နှာ / tracors & အော်တိုဘို့ဂီယာအုံ / tracors & အော်တိုဘို့ဂီယာအုံ
အမျိုးအစား: tracors & အော်တိုဘို့ဂီယာအုံ
TRACTORS & AUTO အတွက်ဂီယာအုံ
စက်ပစ္စည်း TYPE အရေအတွက် (သတ်မှတ်)
ဝါသနာတရုတ် အဆင့်မြင့်ထိရောက်သောလောင်းကစားများ YX3120 14
CNC HOBBING တရုတ် YKA3120 / 02 2
အထွေထွေဂီယာ HOBBING တရုတ် CCCP 1
slotting စက် အထွေထွေ slotting စက် Y5120A 37
ပိုမိုမြင့်မားသောမြန်နှုန်း slotting စက် YSL5120 / 45 1
ဖောင်းစက် ယေဘုယျ Y9380 39
ဝက်အော်တို YB332C 2
Gear Chamfer စာနယ်ဇင်းစက် YJ9332 1
Gear Chamfer ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း 15
မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် ယေဘုယျ YP4250 5
CNC မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် YK4216 1
ပွန်းပဲ့စက် Y4650 1
Milller မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်အဆုံးသတ်ထားသည် 1532 1
Spline ရိုး Miller က Y631K 4
Spline Miller က Y63K 16
longitudinal ကြိတ်စက် X50C 2
အလျားလိုက်စက်ကြိတ်စက် X62W 2
Drill Miller က ZX32 8
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုတ်သိမ်းပလက်ဖောင်းကြိတ် X62W 3
ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် XA5032 1
ဒေါင်လိုက်ဓာတ်လှေကားပလက်ဖောင်းကြိတ်စက် X52K 1
CNC ကြိတ်စက် XR4018 1
single- ကော်လံကြိတ် X1532 3
နှစ်ဆကော်လံကြိတ် X2540 1
ဒေါင်လိုက်မိတ္တူကြိတ်စက် HURON 1
မြင့်မားသောထိရောက်မှု spline ကြိတ်စက် X333 / HJ 2
စားပွဲဝိုင်း - ကြိတ်ခွဲစက် X3016 3
နှစ်ဆအကွာအဝေးအသံဖမ်းစက် CM0634BW 1
Semi- အလိုအလျောက်ချည်ကြိတ် SB6511 1
Driller Bench လေ့ကျင့်ခန်း Z4012A 1
တူးစက်များ, radial Z3025 * 10 2
နက်ရှိုင်းသောတွင်းတူးစက် Z2115? 5
ဒေါင်လိုက်တူးဖော်ခြင်း? Z-5150A 2
ဒေါင်လိုက် threading စက် SB4118 1
ကြိတ်စက် မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် M7332A 1
universal ပြင်ပကြိတ်စက် MG1432 1
အတွင်းကြိတ်စက် MD2110 1
ဝက်အော်တိုအဆုံးကြိတ်စက် MBS1620 2
ကြိတ်စက်အဆုံးသတ် MB1632 3
ပြင်ပကြိတ်စက် M1332B 21
ကြိတ်စက်အဆုံးသတ် CM0632BW 3
ဒေါင်လိုက်စားပွဲဝိုင်းကြိတ်စက် M74125 / 1 1
ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားအလျားလိုက်ကြိတ်စက် M50100 1
အားလုံး - ရည်ရွယ်ချက်ကြိတ်စက် M6025 2
spline ကြိတ်စက် M8612 1
ချွန်စက်ကြိတ်စက်ကိုဆွဲပါ M6110 1
ကြိတ်စက်ကိုမြှင့် hob M6420B 1
ကြိတ်စက်ကိုချွန်ပါ Y7432 1
CNC ဆလင်ဒါကြိတ်စက် MK1602 / 500-H ကို 5
CNC ဆလင်ဒါကြိတ်စက် MK1602 / 500-HC 1
MAGE ဂီယာကြိတ်စက် HSS30 1
磨床内圆磨床磨床 MGD2110 1
ဂီယာကြိတ်စက် Y7125 1
Thread စက်ကိုဖိ Thread စက်ကိုဖိ ZA28-31.5 1
ကြိုးကြာငှက် လူပျို Cantilever တံတားချီစက် LDA5-23.5 1
လူပျို Cantilever ချီစက် LDA5-23.5 19
Cantilever တံတားချီစက် 20T 5
Spline အေးဖွဲ့စည်းသည့်စက် CZ730-A 1
Lathe Lathe မှတ်တမ်းတင်ခြင်း CM0632BW 65
အထွေထွေခုံ CZ6162A 1
အလျားလိုက် CNC ကို lath CKJ6140 34
ဓာတ်လှေကား jerrican ရုတ်သိမ်းစက် SHT-0.5T 2
လျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားစက် DYBC-A-1T 1
ပျင်းစရာစက် ဒေါင်လိုက်ဒဏ်ငွေပျင်းစရာစက် T716A 1
ဒေါင်လိုက်စိန်ပျင်းစရာစက် T7200 1
မျက်နှာနှစ်ဖက်မျက်နှာပြင်အလျားလိုက်ကောင်းသောပျင်းစရာစက် T740A 10
အလျားလိုက်ကြိတ်စက်များ TX68 1
တစ်ခုတည်းမျက်နှာအလျားလိုက်ဒဏ်ငွေပျင်းစရာစက် TJK7040 1
ဟိုက်ဒရောလစ် shaper BY60100C 1
လျှပ်စစ်မော်တာ လျှပ်စစ်မော်တာ VFNC-132 10
Hydraulic press ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းလျော်ကြေးပေး Y41-10A 2
လေးကော်လံဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း YB32-630 1
mono ကော်လံဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းလျော်ကြေးပေး Y41-10B3 1
Hydraulic press ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း 1
တစ်ခုတည်းကော်လံတစ်လောကလုံးဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း Y30-6.3 1
အမြဲတမ်းသံလိုက်စက်ပျက်သွားသည့်စက် NS-400A 1
Broaching စက် broaching စက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း 13
broaching စက် အရင်းအမြစ် 16
အလျားလိုက် ental broaching စက် L6110 2
ဒေါင်လိုက် ental broaching စက် L5110A 3
ဒေါင်လိုက် broaching စက် 2
စာနယ်ဇင်းများ နှစ်ဆ disk ကိုပွတ်တိုက်မှုစာနယ်ဇင်း J53-300 15
တံခါးပိတ်တစ်ခုတည်းလား နှိပ်ပါ JA31-160T 2
Single-point စာနယ်ဇင်းဖွင့်ပါ 60T 1
air ကို Hammer လေသံ C41-150 5
ပွဲစားစက် D51-450A 1
ညှပ် ဘားညှပ် Q42-500 1
Hack Sawing စက် အလျားလိုက်ခါးပတ်ကို hack sawing စက် GB-4025 3
ကုမ္ပဏီမှ GX-4025 3
လှိုကြိတ် VFM300 1
အမြစ်မှုတ်တံ L48 * 66WD 1
။ S114 2
သွားပြွန်တောက်ပသောသတ္တုသွားစက်ကိုသွားဖြောင့်ပါ Y2726 1
သွားပြွန်တောက်ပသောသတ္တုသွားစက်ကိုသွားဖြောင့်ပါ Y2732-SS 1
ဂီယာပုံဖော်စက် Y2380 1
တုန်ခါမှုမော်ဒယ်စက်ကိုလှုပ်ခါ Z148K 2
လျှပ်စစ်မီးပွားလိုင်း cutterbar DK7750 1
ရေပြင်ညီ cnc အလုပ်စင်တာ မတ် -630H 1
ရေပြင်ညီ cnc အလုပ်စင်တာ မတ် -500H 1
ဒေါင်လိုက် cnc အလုပ်စင်တာ MXR-460V 2
ဒေါင်လိုက် cnc အလုပ်စင်တာ MXR-560V 3
impedance ကိုက်ညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ GC-1205 1
impedance ကိုက်ညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ GCLS-1606DY 1
အစေးအမျိုးအစား carburizing မီးဖို RQ3-105-9 19
နှစ်ခန်း - အအေးလေဟာနယ်အပူပေးစက် ZC2-65 1
လေဟာနယ်အပူပေးစက် KZM-36-11 1
အစေးအမျိုးအစား tempering မီးဖို RQ3-75-9 1
ခုခံအရည်ကျိုမီးဖို စက်မှုဇုန်အခန်းထဲကအမျိုးအစားခုခံမီးဖို CL-45-9 2
စက်မှုဇုန်ခုခံမီးဖို RQ3-105-9 9
CNC ခုခံမီးဖို RQ3-105-9 4
ဘက်စုံသုံးမီးဖို RM2.110.9DF 1
မြင့်မားသောအကြိမ်ရေ induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများ GP100-H9 1
မာကျောစက် GCT10120-TL 1
carburization များအတွက် coupe tappet ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း JHL1 1
carburization များအတွက်အဆက်မပြတ်နှစ်ဆထုတ်လုပ်မှုလိုင်း LS12 1
ခေါင်းလောင်းအမျိုးအစား annealing မီးဖို 2
စဉ်ဆက်မပြတ် annealing မီးဖို 1
rotary စားပွဲပေါ်မှာအမျိုးအစား abrator Q3525C 1
ဘီးပေါက်ကွဲမှုဖရိုဖရဲ Q3110I 4
ဘီးပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေးဖရိုဖရဲ Q311I 2
နှစ်ဆချိတ်အမျိုးအစားဘီးပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေး Q378 型 9
တွမ်အမျိုးအစား? ဘီးပေါက်ကွဲမှုစက် Q226 1
crawler အမျိုးအစား? ပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေး Q326 3
ပေါ်ကိုအမျိုးအစားဘီးပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေး XGQT200 1
အပူပေးစက် ZJ20K-5 3
အလတ်စားကြိမ်နှုန်းစက် KGP503-160-1 1
အလတ်စားကြိမ်နှုန်းအပူစက် KGPS250-1 1
Isothermal အဓိကတိုက်ပွဲလိုင်း 1
အခန်းအမျိုးအစားဘက်ပေါင်းစုံ furance 1
box တစ်ခုမှတံဆိပ်ခတ်ထားသောပုံစံသည်မီးဖိုထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းကိုပိုမိုအသုံးပြုသည် 3
သွားပရိုဖိုင်းနှင့် Helix ၏အမှားများ 3204 2
စက် cone ဂီယာဘီးကိုစစ်ဆေးသည် Y9550 1
ဒေါင်လိုက် optical gauge FD3 1
universal ဂီယာ tester - 1
Universal တိုင်းတာခြင်းပရိုဂျက်တာ JD18 1
မှန်ဘီလူး universal ဏု JX7 1
အီလက်ထရွန်? JEM-6A 1
အကြီးစား metallographic ဏု XJG-04 1
မှန်ဘီလူး HXD-1000 1
ဒေါင်လိုက် metallographic ဏု XJL-02 1
scan ဖတ်လျှပ်စစ် - ဏု DX-3A 1
imput ဏု ဂျပန်နိုင်ငံတွင် 1
မြင့်မားသောလေဟာနယ် Coater DM-200 1
ခိုင်မာသောစမ်းသပ်သူ Rock- ကောင်းစွာခက်ခဲတဲ့စမ်းသပ် HK9-45 1
Vickers ခက်ခဲတဲ့စမ်းသပ်မှု HV-120 1
ဏု VICKERS Hardness စမ်းသပ် 401MVATM 1
Rock ခက်ခဲတဲ့စမ်းသပ်မှု HR-150 1
B ကို Hardness စမ်းသပ်မှု HB-3000 2
dual- ခြမ်းဂီယာလှိမ့စမ်းသပ် SN3 2
ဂီယာ runout စစ်ဆေးရေး M6 17
စစ်ဆေးရေး - 13
hob ကြိတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးပြီးနောက် ZL-012 1
နမူနာလွှ Q-3A 2
မြင်နိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်း 722 1
ချိန်ခွင် TG328B 1
spectrophotometer ဆန်ခါ 722 722 1
နှစ်ဆပိုက်မြင့်မားသောအပူချိန်ကာဗွန်မီးဖို SK2-2.5-13TS 1
glazing စက် P-1 1
metallographic grinder & polisher PA ဆိုပြီး-2 1
လျှပ်စစ်မီးဖို 621-3 1
ကုန်သွားသည် - 3
တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လက်ရှိသံလိုက်မှုန်စစ်ဆေးခြင်း CEW2000A 1
universal ဂီယာ tester JHT26W 1
ဂီယာစင်တာ tester JE32 2
တိုင်းတာစက်ကိုသြဒိနိတ် MQ8106 1
ကြမ်းတမ်းစွာစမ်းသပ်သူ TR200 1
ဆား - အခိုးစားစား tester YWX / Q150 1
ရောင်စဉ် WX -51
ချိန်ခွင်လျှာချိတ် PJ010 1
သန့်ရှင်းရေးစက် HQ-Ⅲ-B 1
အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်ယန္တရား SCS-2 1
ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ CHC 型 0.4 1
နေ့စဉ်သုံးဘွိုင်လာ LHG0.15-009 1
ဓာတ်ငွေ့ပစ်ခတ်သောမီးဖို CG1Q-1.3.21B 46
300 အမျိုးအစားဒီဇယ်ရေနံမီးစက် 63000ZD2 5
တီကောင်ဂီယာဘီးစက် S136510 1
လေဖိအား VF-3/7 1
ထုပ်ပိုးစက် ထုပ်ပိုးစက် XTB027 2